Nhau - kwakakurudzira Mutsetse
Nekuenderera mberi kwekuvandudza tekinoroji, kwakakurudzira mitsara mumakore achangopfuura ane hutsva kuvandudzwa, kwakakurudzira mutsetse kubuda kwemarara kupisa kupora system, uye mune mimwe mitsara yekugadzira.
Annealing vira ine radiant chubhu isina kunanga kudziya tambo, iyo mafuta anopiswa neino penya pombi unopisa wakagadzirwa mushure meflue gasi kubva kumagumo eiyo inopenya pombi neanopisa mweya exchanger mushure mekudonhedza, ino nguva kuchine yakanyanya tembiricha flue gasi, ne kupisa kwakawanda. Yakakwenenzverwa mutsetse Kuti ushandise zvizere kupisa kwesimba, kwakabatana pamwe nekushandiswa kwesimba kwechikamu chose, muchoto chiutsi system pane iyo pombi yekuwedzera mweya kupisa chinja uye inopisa mvura kupisa chinja, zvichiteerana, kwakakurudzira mutsetse wekubvisa tsvina, kudzima mvura , Inopisa mweya unopisa Dry uye kupisa chikamu chekuchenesa cheye. Kubudikidza nekudzoreredza kwe flue gasi tsvina kupisa, inogona kudzora iyo yakazara tambo yekuchenesa uye kuomesa kupisa kwe steam kana magetsi mashandisirwo, kudzikisa kugadzirwa kwemitengo, uku uchidzikisa emagetsi
Ukobvu hunowedzerwa kuderedzwa kusvika pakukora kunodiwa kune kwakakurudzira mbishi zvinhu. Kwakakurudzira mutsetse Cold kupumburu ndiyo yakajairika kuroora -mira inodzoserwa rinopfungaira chigayo uye kutonhora kuenderera kutenderera yekugadzira mutsara. Mune imwechete stand inodzoserwa rolling chigayo pane inotenderera chigayo pane inotenderera chigayo kakawanda, kuitira kuti ukobvu hwesimbi ubvise zvishoma nezvishoma kuonda. Mune inoenderera inotonhora inotenderera yekugadzira tambo, iyo simbi tambo yakave ichiramba ichitenderedzwa kusvika kune yaunoda ukobvu kuburikidza ne seti yeanoverengeka anokungurutsa zvigayo.
Galvanizing: galvanizing inopisa inopisa yakakungurutswa coil, inotonhora yakakungurutswa coil pamusoro pekurapa maitiro. Kunyanya kutonhora iko zvino
Yakakungurutswa kwakakurudzira jira, mbishi zvinhu mushure inopisa rinopfungaira mushure pickling uye chando rinopfungaira kugadzira. Saka ukobvu hudiki, uye pamusoro pacho panotsvedzerera, kuchinjika kune akawanda anoshandiswa. Yakakudziridzwa mutsetse Asi nekuvandudzwa kwehupfumi hwehunyanzvi, dzakawanda nguva dzinoda gobvu kwakakurudzira jira. Kana izvo zvinodiwa pamusoro zvisati zvakakwirira, unogona kushandisa zvakananga ndiro inopisa-yakakungurutswa kuti isimbise. Hot-yakakungurutswa kwakakurudzira jira ukobvu kazhinji 2-4mm, hupamhi hwe1000-1600mm, uye inotonhora-yakakungurudzwa kwakakurudzira jira kufukidza nzvimbo haina kunyanya kukura, saka kuchinjaniswa hakuna kusimba.
Dhizaina galvanizing maitiro pamwechete, kwakakurudzira mutsetse mune imwechete yekugadzira tambo pane kugadzirwa kwemaitiro maviri, kwete chete kuchengetedza maitiro, asiwo kuburitsa iri nani mhando kwakakurudzira jira, kwakakurudzira mutsetse inova iri mu-mutsetse annealing nzira, inonzi iyo Senjimir nzira Iyo Sengmiri waya yekupisa tiravira ine maviri akapatsanurwa zvinhu, ayo anopiswa kusvika ku450 ° C mune yakasanganiswa gasi choto kubvisa mafuta kubva pamusoro pemutsara uye iyo simbi strip yepasi yakasanganiswa. Uye ipapo simbi mukati mekudzikisa vira kuti irambe ichipisa kusvika 700-800 ℃, kupedzisa kugadzirisazve kuvaka, ichideredza choto cheammonia kuora gasi kuti idzore pamusoro peiyo oxide firimu uye kudzivirira kumwe kusanganiswa kwesimbi. Pekupedzisira, kwakakurudzira mutsara tambo yesimbi yakatonhorera kusvika 480 ° C uye kupinda muhari ye zinc. Kuumbwa kweiyo inopisa-dip galvanizing tekinoroji ndiyo hwaro hwemazuva ano kupisa-dip galvanizing tekinoroji, kuitira kuti hupamhi hwechigadzirwa hunosvika 1m uye yekumhanyisa mutsetse kumhanya inosvika 90m / min. Simbi yepamusoro haichashandisi zvinowedzera, uye tembiricha uye zinc mhinduro inowirirana, kwakakurudzira mutsetse kuitira kuti tembiricha yeZinc poto, nyore kudzora huwandu hwealuminium, kuwedzera kwakakura kwehunhu hwechigadzirwa.